Baahin: Axad, Apr 24, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Munaasabad lagu maamuusay barnaamijka tallaalka carruurta ee cudurada dilaaga ah oo lagu qabtay Garowe; M/weyne Faroole oo ammaanay waxqabadaka wasaarada caafimaadka … Gen. C/samad Cali Shire oo shir wada-tashi ah la yeeshay guddiga amniga ee Bossaso, kormeerayna madaarka iyo dekedda Bossaso … Xayiraad lagu soo rogay gaadiidka u safra degaanka Majarre ee gobolka Bari; odayaasha dhaqanka oo cabasha ka soo jeediyey arrintaas … Cawke, Gudd. cusub ee gobolka Mudug oo wareejiyey xilkii agaasime ee uu hore uga hayey wasaarada waxbarashada … Warbixin guud oo ku saabsan saamaynta abaaraha ee gobollada Puntland … – Radio Daljir
Abriil 24, 2011 12:00 b 0
?Waa been abuur wararka sheegaya in ragga la qabtay ay ka dambeeyeen dilkii marxuun Jifi-jabsade ee Galkacyo? Max?ed Suldaan Xassan Baalle.